America Inotsamwiswa naVaYamba Vakati Zimbabwe Itengese Mangoda Ayo
Chikumi 24, 2011
America inoti haisi kufara nezvakaitika kuKinshasa ku Democratic Republic of Congo neChina uko sachigaro weKimberley Process, Va Mathieu Yamba, vakapa Zimbabwe mvumo yekutengesa mangoda ayo ekwaMarange.
Mugwaro rayaburitsa neChishanu, America yati musangano uyu wakapera pasina kuwirirana sezvinodiwa ne Kimberley, nokudaro KP hayaifanira kupa mvumo yekuti mangoda aya atengeswe. Studio7 haina kukwanisa kubata Va Yamba kuti tinzwe divi ravo.
Asi ivo Va Yamba vaudza sangano renhau re AFP kuti makambani eMbada ne Marange Resources, ava nemvumo yekutengesa mangoda pamisika yepasi rose.
VaYamba, mugwaro ravakapira kumusangano we Kimberley Process, vakati pachange paine nhumwa mbiri dze Kimberley dzichange dzichishanda nemamwe makambani ari kuchera mangoda mu Zimbabwe asati apihwa mvumo.
Asi vakati Marange Resources ne Mbada hadzifanirwe kuongororwa.
Masangano akazvimirira ari kunyunyuta achiti VaYamba vakaita zvemusoro wavo.
Gurukota rezvemigodhi, Va Obert Mpofu, vaudza Studio7 kuti Zimbabwe ichaenderera mberi ichitengesa mangoda ayo kuburikidza nezvakataurwa naVaYamba ku DRC.
Mukuru weCentre for Research and Development ma Mutare, Va Farai Maguwu, uye vanotiwo havana kufara nezvakaitwa naVa Yamba.
Hurukuro naVa Obert Mpofu